Demands of Rohingya for the atrocities done to them – Rohingya Language Foundation
By Maung Thin Uo Maung
ROHINGYAS’ DEMANDS FOR REPATRIATION
ArakanTimes Correspondent, Teknaf On13rd July 2018,at Unchiprang camp
1. NATIVE STATUS
Rohingyas are native indigenous people of Arakan and thus their “Native Status” shall be reinstated by an Act of Parliament with an international guarantee.
I. Firstly, “Citizenship Cards” shall be issued to the “Rohingyas living in Arakan State”.
II. Secondly, “Citizenship Cards” shall be issued to the “Rohingyas living in Bangladeshi Refugee Camps” there and repatriate to Arakan State with the “Native Citizenship Status”.
III. Thirdly, “Citizenship Cards” shall be issued to the “Rohingya diasporas living across the World” and repatriate to Arakan State with the “Native Citizenship Status”.
Rohingyas shall be repatriated back to their “original ancestral villages” and returned “all confiscated farm lands” with sufficient compensation for their loss of properties.
“UN Peacekeeping Forces” shall be deployed in Arakan State along with “Rohingya Police Forces” in order to protect Rohingyas’ lives and properties.
Perpetrators shall be held accountable for the crimes that they have committed before an “International Tribunal” such as the International Criminal Court (ICC) rather than before “Burmese domestic courts” as the “local remedies have already been exhausted”.
နေရပ်ပြန်ပို့ခြင်းနှင့် ရိုဟင်ဂျာများ၏ တောင်းဆိုချက်များ
၁) တိုင်းရင်းသား အဆင့်အတန်း
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတို့သည် အာရ်ကာန် (ယခုခေါ် ရခိုင်) ပြည် ဌာနေဇာတိလူမျိုး ဖြစ်သည့်အလျောက် ၄င်းတို့၏ ရုတ်သိမ်းခြင်း ခံခဲ့ရသော တိုင်းရင်းသားဖြစ်မှု အဆင့်အတန်းကို နိုင်ငံတကာ အာမခံချက်နှင့် အတူ ပါလီမန်အက်ဥပဒေ ကနေတဆင့် အတည်ပြု၊ ပြန်လည်အသိအမှတ်ပြု ပေးရမည်။
ပထမဦးစွာ အာရ်ကာန်ပြည်နယ်ထဲတွင် ကျန်ရစ်နေထိုင်နေကြသော ရိုဟင်ဂျာများကို နိုင်ငံသားကဒ်များ ထုတ်ပေးရမည်။
ဒုတိယအဆင့် အနေနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေရှ့်နိုင်ငံရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် နေထိုင်နေကြသော ရိုဟင်ဂျာများကို တိုင်းရင်းသားဖြစ်မှု အဆင့်အတန်းနှင့်အတူ နိုင်ငံသားကဒ်များကို ၎င်းဒုက္ခသည်စခန်းများတွင်သာ ထုတ်ပေးပြီးမှ ဌာနေ၊ နေရပ်သို့ ပြန်ပို့ရမည်။
တတိယအဆင့် အနေနဲ့ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်သို့ ပြန့်ကျဲထွက်ခွါသွားကာ အခြေချနေထိုင်နေကြသော ရိုဟင်ဂျာများကို မြန်မာနိုင်ငံ ဌာနေတိုင်းရင်းသား နိုင်ငံသားများအဖြစ် ပြန်လည်အသိအမှတ်ပြုပြီး သူတို့၏ စိတ်ဆန္ဒအလျောက် ဇာတိနေရပ် အာရ်ကာန်ပြည်နယ်သို့ ပြန်ခွင့်ပေးရမည်။
ရိုဟင်ဂျာများကို သိမ်းယူခြင်းခံရသော လယ်မြေများကိုပြန်ပေးပြီး ဆုံးရှုံးခဲ့ရသော ပစ္စည်းဥစ္စာ များအတွက် လုံလောက်သော လျော်ကြေးများပေးကာ သူတို့၏ မူလဘိုးဘွားပိုင် ကျေးရွာများသို့ ပြန်ခွင့်ပေးရမည်။
အာရ်ကာန်ပြည်နယ်တွင် ရိုဟင်ဂျာတို့၏ အသက်လုံခြုံမှုနှင့် ပစ္စည်းဥစ္စာများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ကုလသမဂ္ဂ ငြိမ်းချမ်းရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် အတူ ရိုဟင်ဂျာ ရဲတပ်ဖွဲ့ တစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းပြီး တပ်ဖြန့်ထားရမည်။
၅) အပြစ်မကင်းမှုနှင့် တာဝန်ခံစေမှု
ပြစ်မှုကျုးလွန်သူများကို မည်သည့် တရားမျှတမှုမှ မရှိသော မြန်မာပြည်တွင်း တရားရုံးများတွင် မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ တရားရုံး (ICC) ကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာခုရုံး တင်ပြီး ရာဇ၀တ်မှု ကျုးလွန်မှုများ အတွက် အပြစ်ပေးရမည်။